Homo Loves: ဥက္ကာ
ကျွန်တော့်လက်မှာပေနေတဲ့အရာတစ်ချို့ကို ဂျင်းဘောင်းဘီမှာ သုတ်ဖယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်ရဲ့ လက်ထောက် အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ တစ်လလောက်ရှိပါပြီအခုဆိုရင်။ ကျွန်တော်တို့ မော်ဒယ်လ်တွေနှင့် အလုပ်လုပ်ရတိုင်း တွေကိုပြန်ပြန်တို့လိမ်း ပေးရတာ၊ မှဲ့တွေကို ဖုံးအုပ်ပေးရတာနှင့် ၀က်ခြံတွေကို ဖုံးကွယ်ပေးရတာကို ကျွန်တော်လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီနေ့ Mountaineer Jeans အတွက် ရှုတင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ သာယာလှပတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ အခြေတည်ထားတဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ့။ Mountaineer က သူတို့ထုတ် ကုန်ကို sexy ပုံရိပ်တစ်ခုအသွင်ထင်ဟပ်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာဆိုတော့ ဥက္ကာကို သူတို့မော်ဒယ်လ်အသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အစွမ်းအကောင်းမွန်ဆုံးပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်။
ဥက္ကာက အရမ်း HOT! သူက hot ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်တစ်ခုရှိခဲ့ရုံမက ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့ သူ့ခံစားချက်ပုံရိပ်တွေကို ပြသရာ မှာလည်း အရမ်းအောင်မြင်ပါတယ်။ ပခုံးတစ်ဝိုက် ကပိုကရိုဝေ့၀ိုက်ကျနေတဲ့ ဆံနွယ်မရှည်တရှည်တွေက လက်ကလေးနှင့်သပ်ပြီး ပုံသွင်း ပေးချင်အောင် ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ မျက်ဝန်းနက်နက်တွေကလည်း အရည်လဲ့နေတာများ ချစ်ရည်တွေရွှန်းလဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ သူ့မေးရိုးတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတာကို ဖော်ပြသလို နုညံ့ပြီးပြည့်တင်း နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကလည်း နမ်းပါလှည့်လလို့ဖိတ်ခေါ်နေသလားပဲ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားအဖုဖုနှင့် ပြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရပ်ရှည်ရှည်မှာ သူ့နေရာနှင့်သူ ဟာကွက်မရှိ ကောက်ကြောင်းလှနေစေတာမျိုးဗျ။ ခြုံငုံပြောရရင် ဗလမောင် ကိုယ်ဟန်ပုံရိပ်မျိုးရှိသူ လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့အမျိုးသားလေးတွေနှင့် အရင်က ကံကောင်းစွာတွေ့ဆုံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာလို နဂိုမျိုးရိုးဗီဇအခံ ကြောင့် ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသားလေးမျိုးလိုလူကို မတွေ့ဆုံဖူးခဲ့ပါ။ အခု အဲဒီဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှလှအပေါ်ကို ကျွန်တော့် လက်အစုံရောက်နေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျော်ကျော်က ဥက္ကာ ကိုယ်ပေါ်ရှိ tattoo ကို မိတ်ကပ်နှင့်ဖုံးပေးဖို့ ပြောထားခြင်း ကြောင့်လေ။
ဥက္ကာ ကိုယ်ပေါ်မှာ tattoo တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ကနုတ်ပန်း ခပ်ဆန်းဆန်း ဒီဇိုင်းတစ်ခုက ညာဘက်တင်ပါး အပေါ်ပိုင်းမရောက်တစ်ရောက် ကနေ ရှေ့ညာဘက်ဆီးစပ်နားရောက်တဲ့အထိ ထိုးထားတာ။ ကနုတ်ပန်းတွေက ကွေ့ဝိုက်ပြီး အရှေ့ဘက်ရောက်နေတာဆိုတော့ ပုံမှန် ဆိုရင် အဲဒါက မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာ Jeans တွေကို အောက်လျောချပြီး ၀တ်ကာရိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပြီးရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တွေမှာတော့ tattoo ကပေါ်လာနိုင်တာကိုး။
မိတ်ကပ်လိမ်းရာအခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် စိတ်နှင့်ကိုယ် သိပ်မကပ်ချင်ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Hot အဖြစ်ဆုံးကောင်လေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေရတာ။ ကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်မှာလဲ? 'Hi, ကျွန်တော်က ညီဇော်ပါ' 'ဟယ်လို...နေကောင်းလားဗျ' 'အစ်ကို့အလုပ်ကို သိပ်သဘောကျတာပဲ' 'ခရီးကလာရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား?' Hi, ကျွန်တော်က ညီဇော်ပါ။ အစ်ကိုနှင့် အလုပ်လုပ်ရ တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်' ဟူး...ပါးစပ်ကို ပိတ်ပြီး ဘာစကားမှမဆိုတာက ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ မာနကြီးပြီး မောက်မာတဲ့ပုံဟန်လည်း မရှိပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ခုပြောဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားနေမိခြင်းက ရူးတယ်လို့လည်းမဆိုသာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ သက်ရှိထင်ရှား ဆွဲဆောင်မှုပြင်းအမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုခွင့်လေးကို လက်မလွှတ်နိုင်ဘူးလေ။
ကျော်ကျော် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခန်းထဲလမ်းလျှောက်ဝင်လာတော့ မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးဖို့ပါးစပ်ဟလိုက်တုန်း ဥက္ကာက နောက် ဘက်မှအသာဝင်လာတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပြောစရာစကားလုံးရှာမရတော့။ ဒီလူဟာ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော် အရင်က ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကိုမမြင်ခဲ့စဖူး။ သူဟာ.... သူ့မျက်နှာ....သူ့ခန္ဓာကိုယ်....ကျွန်တော့်မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ရပ်နေမိ တာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မေးရိုးပြုတ်ကျသွားတဲ့အတိုင်း။ ကျော်ကျော်က တစ်ခုခုပြောနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကြားလိုက်တာ ဘာမှမဖြစ် လို့တော်သေးတာ ဘယ်စကားလုံးမှကြားနိုင်စွမ်း မရှိချိန်မို့လေ။
အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်မပါ၊ ပေါင်အစုံကို ကားကာ သက်သောင့်သက်သာဖြင့် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ခုံမှာ ဥက္ကာထိုင်လိုက်တယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ထိုင်နေတဲ့ ဥက္ကာ ဦးခေါင်းမှာ အနက်ရောင် ဆံနွယ်မရှည်တရှည်တွေက ပခုံးတစ်ဝိုက်ကို ဝေ့၀ဲကျလို့။ ဥက္ကာက တကယ့်ကိုလှပချော မွေ့သူပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှ မသိမသာ အာမေဋိတ်သံတစ်ချို့တောင်ထွက်သွားမိရဲ့။ သူ့မျက်နှာကို ဒါရိုက်ထိုးထားတဲ့ မီးရောင်ဟာ အချိုးကျတဲ့ မေးရိုးတွေရဲ့ ခိုင်မာမှုကို မထင်ရှားနိုင်စေခဲ့ပါ။ ဥက္ကာဟာ တကယ်တမ်းတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ကိုမလို၊ ကပိုကရိုဖြစ်နေတာ ကို လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်ဖို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဗျ။
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခန်းထဲကထွက်ပြီး ကျော်ကျော့်ကို ဒီအကြောင်းသွားပြောဖို့ကလည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ကျွန်တော့်မှာမရှိဘူးလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ချောမွေ့လှပတဲ့ မျက်နှာလေးတစ်ခုပေါ်မှာ အလုပ်ဆက်များချင်သေးတာပါ။ မေးရိုးတွေရဲ့ ထင်ရှားမှုကိုပေါ်လွင် အောင်၊ ညှို့ငှင်နေတဲ့ မျက်ဝန်းနက်တွေကိုတောက်ပအောင်၊ ခပ်ဖူးဖူး နှုတ်ခမ်းလွှာတွေ ရွှန်းစိုအောင် အရောင်တွေကို အလွှာတစ်ခုအဖြစ် နုညံ့စွာ ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်တောင်ရှည်တွေ တဖျတ်ဖျတ်ခတ်နေတဲ့ ဥက္ကာမျက်ဝန်းတွေကို brush လေးနှင့် ကစားမိ နေတာမှာ မနာလိုစိတ်တွေတောင်ဝင်မိပါရဲ့။ ကျော်ကျော် အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတာတောင် မသိမိအောင်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ဥက္ကာရဲ့ ရှေ့ မုဆိုးဒူးထောက်ပုံနှင့်ထိုင်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ ဖြစ်ပျက်နေကျ သဘာဝအတိုင်း ရှေ့ဆက်ဖို့လက်တွေက လှမ်း ပြီးမှ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။ တံတွေကိုး ဂလုကနဲမျိုချ၊ တစ်ခုခုကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ကြိုးစားလိုက်ရတာပေါ့။ လည်ချောင်းကို ရှင်းအောင်လုပ်၊ မိတ်ကပ်သေတ္တာကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ဟိုသည်ကြည့်သလို လုပ်လိုက်တယ်။
Professional. ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေတာ Pro တစ်ခု။ ကျွန်တော်နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ ဘာ ပြဿနာဘာအခက်အခဲမှ မရှိခဲ့စဖူး။ သဘာဝကျကျပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း အပြုံးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ 'ကျွန်တော် က ညီဇော်ပါ' အိုး...ဥက္ကာကတကယ့်သဘာဝအစစ်အမှန်။ 'ဟုတ်ကဲ့' တဲ့ဝေ့၀ဲကျနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို သူ့ဘာသာ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ပင့် တင်ရင်းဖြေတယ်။
အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကသာပြုံးနေတာ မျက်ဝန်းတွေက လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ကြည့်နေ မိပါတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ T-shirt ကို သူခေါင်းပေါ်က မပြီးချွတ်လိုက်တဲ့ခဏ ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေက ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ပေါ် လွင် လှပပါရဲ့။ နို့သီးခေါင်းလေေးတွက ပန်းရောင်ပြေးနေသလို သူ့ abs တွေကလည်း တောက်ပ၀ံ့ကြွားနေပါတယ်။ သူ့ရင်အုပ်အစုံမှ မွှေးညှင်းနုလေးတွေက ဆီးစပ်အထိဆင်းသွားရော။ ခပ်လျော့လျော့လုပ်လိုက်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကြောင့် မြင်နေရတဲ့အမြှောင်းကြားလေး ကနေ ဆီးခုံမွှေးတွေကို မြင်ရတာများ သူ့ငပဲနှင့် လက်မအနည်းငယ်သာကွာတော့ကြောင်း ရိပ်မိစေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဥက္ကာရဲ့ tattoo ရှိရာဆီကို တဖြည်းဖြည်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါပြီ။ တင်ပါးတစ်ဖက်ရဲ့ အောက်ဖက်နားခပ်ကျကျမှာထင်ရှားစွာပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ့် နှုတ်ခမ်းတွေကို မထိန်းနိုင်စွာ လျှာနှင့်သရပ်မိပါတယ်။ God, ကျွန်တော် ဒီမယုံနိုင်ဖွယ်လူကို ကျွန်တော်တို့ထိချင်နေမိပြီဗျ။
ကျွန်တော် ဒီလူပျိုချောကို ထိတွေ့ဖို့ အခကြေးငွေအပေးခံထားရတာပဲလေ။
အို...ဘုရားသခင်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မိတာ ခံစားရပါတယ်။ မိတ်ကပ်သေတ္တာကိုဖွင့်ပြီး သင့်တော်မည့် concealer နှင့်ရေမြှုပ်တစ်ချို့ကို ခပ်ကြာကြာလေး ရှာနေမိပါရဲ့။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ အနည်းငယ်တုန်ခါနေတဲ့ လက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက် လိုက်ရင်း 'နည်းနည်းတော့ အေးမယ်ဗျ' ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ကြားရလောက်တဲ့ အသံနှင့်သူ့ကိုပြောလိုက်မိပါတယ်။ ဥက္ကာရဲ့ တင်သားပေါ် ကို concealer အားရိုက်ခတ်ဖုံးကွယ်ခြင်းလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ် စကားစမြည်ပြောလိုက်ရင်းပေါ့။ စကားစမည်ပြောခွင့် ဖန်လိုက်ခြင်းပါ။ ဘယ်တော့မှ မရမဲ့အခွင့်အရေးကို ရရှိခြင်းပါ။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားပုံမျိုးနှင့်ဆို တော်တော်ဆိုးတဲ့ အမူအရာတွေလုပ်မိနေတော့မယ်။ ကျွန်တော် အဲလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေ အထင်အမြင်သေးသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဥက္ကာနှင့် ဒီရက်လေးရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ဘယ်လိုပြီးဆုံးသွားမယ် ဆိုတာ မသိပေမဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေတော့ ထင်ဟပ်သွားစေချင်ပါတယ်။ 'လေယာဉ်ခရီးစဉ်က အဆင်ပြေလားဗျ?' ကျွန်တော် ညင်ညင်သာသာ မေးလိုက်ပါရဲ့။ လေးလေးမှန်မှန်နှင့် ယဉ်ကျေးတဲ့လေသံမျိုး ကြိုးစားပြောလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော် တံတွေးမျိုချမိပါတယ်။ ချိုချိုသာသာနှင့် ခပ်တိုးတိုးဆိုတတ်တဲ့ သူ့လေသံကိုပြန်နားထောင်ချင်မိပါ၏။ 'ဒီနေ့ နည်းနည်းအေး တယ်နော်.. သိပ်မချမ်းဘူးလို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ' အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ဥက္ကာက 'ရာသီဥတုအေးတာ' ကိုနှစ်ခုလောက်ထပ်ပြောပြီး သူ့ စကားလုံးကိုထင်ရှာစေတယ်။ ရာသီဥတုက အေးတယ်ဆိုတာ ဥက္ကာသိတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရာသီဥတုအေးမြတာကို အသားကျ နေပါပြီ။ ဥက္ကာရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မာပြီးတောင့်နေတာ ကျွန်တော့်မှာ မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်ခဲ့။ God, ကျွန်တော့်လျှာလေးနှင့် နွေး ထွေးမှုကိုပေးချင်ပါရဲ့။
ကျွန်တော်သက်ပြင်းအသာချမိပါတယ်။ ဟုတ်တယ် သူ့အနေနှင့်တော့ အသားကျနေလောက်ပါပြီ။ မော်ဒယ်လ်တွေက ရာသီဥတုအေး သော်လည်း အ၀တ်မပါတာ၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အ၀တ်ဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာတွေကို ကျင့်သားရနေကြပြီထင်ပါတယ်။ အရူး... သောက်ရူးပဲ...ကိုယ့်ဖာသာ ပြောမိပါရဲ့။ ဥက္ကာအသားအရေက ချောမွတ်ပြီးသားဆိုတော့ tattoo ကို မိတ်ကပ်သားနှင့် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အသားအရေဟာ တသားတည်းဖြစ်သွားရမှ။ နည်းနည်းလေးထပ်ပြီး အချောသပ်လိုက်ပါတယ်။ 'အစ်ကို့ tattoo ကို ကျွန်တော် တော့ သဘောကျတယ်ဗျ' စကားမပြောဘဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးထားတဲ့ကြားက စကားပြောမိတယ်။
ဥက္ကာက မိတ်ကပ်လိမ်းခံနေရတာကို ပျင်းလာပြီထင်ရဲ့။ ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန် လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက် တွေက နှေးတုံ့နေရော။ ဥက္ကာရဲ့ အရေပြားတွေက ချောမွေ့ကြည်လင်လွန်းပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက so hot.... ကျွန်တော့် မျက်နှာက ဥက္ကာရဲ့ ငပဲနှင့်အလွန့်ကိုနီးကပ်နေတာ၊ ဘောင်းဘီအဟကြားကမြင်နေရတဲ့ အမွှေးနုလေးတွေဟာ အား....ကျွန်တော့်စိတ် တွေ သောင်း ကျန်းလာပါပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပေး ဥက္ကာလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ကာ သူ့ လိုအင်ဆန္ဒဆီ လမ်းညွှန်ပေးနေတာဗျ။
ကျွန်တော် သူ့ဆီးခုံက အမွှေးနုလေးတွေကို ပွတ်သပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲကို လျှာဖျားလေးနှင့် ရစ်ပတ်ပြီးဆွဲမျိုချင်လိုက်တာလေ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ကျောက်သားအလားမာတောင့်နေမိပြီ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ အလုပ်လုပ်နေ တာ.... Professional ဆန်နိုင်သမျှ ဆန်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် အလုပ်များနေတဲ့ ကျွန်တော့်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအလုပ်မှာပဲ အာရုံဝင်စားရတာပါ။ ဒီထက်မပိုရဘူး။ အလုပ်ပြုတ်ဖို့ မကြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်စွန့်စားကြည့်လို့ရနိုင် တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် အလုပ်များနေတာကို ဥက္ကာစောင်းငဲ့ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆံနွယ်ခွေကောက်လေးတွေကို သဘောကျဟန်တူပါရဲ့။ ပြီးတော့ ပြုံးလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကပေါ်လာတတ်တဲ့ ပါးချိုင့်တွေကို သူငေးတယ်။ နည်းနည်းပိန်သွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ဟန် ကိုကြည့်ရင်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အလုပ်များနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းသွယ်သွယ်တွေကို ဆက်လက်အလုပ်ရှုပ်စေချင်ဟန်အမူအရာ က။
ကျွန်တော်မျက်လွှာပင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူပြန်ငုံ့ကြည့်တာနဲ့ နည်းနည်းခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြင့် 'သိပ်မကြာတော့ပါဘူး အသားအရောင်နှင့် တစ် သားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေလို့ပါ။ အစ်ကို့အသားအရေက သိပ်ကောင်းတာပဲနော်' လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။
'ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စမ်းကြည့်ချင်လား?' အဲလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးစကားလုံးတွေကို ဥက္ကာရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကပြောနေသလိုပဲဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်ဟန်ဖြင့် 'ကျေးဇူးပဲဗျ' တဲ့ပြောပြန်တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူလည်းလူတွေ အလုပ်အပေါ်အမြင်တစ်မျိုးကြည့်ကြမယ်၊ တော်တော်များများက သူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်နေကြ၊ လူတွေထင်မြင်ချက်ပေးနေကြတာကို တွေ့ကြုံဖူးနေရတာဆိုတော့။
ကျွန်တော့်လက်တွေက တုန်ခါနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးနှင့် ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို ပြသနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို လိုအပ်နေခဲ့ပြီ။
ဥက္ကာကပြုံးပါရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို အဆုံးသတ်ဖြုတ်ကာ တင်ပါးအကွဲကြောင်းအဆုံးသတ်ပေါ်ကာနီးထိ လျောချ ပေးတယ်လေ။ ကျွန်တော့်လက်လေးတွေနှင့် အသာတို့ကိုင်မိစဉ်ခဏ တစ်ကိုယ်လုံး အေးခဲသွားသလိုမျိုး၊ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေဟာ ပြူးကျယ်၊ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ တင်တင်းစေ့။ အိုး....Yeahh! ကျွန်တော်သူ့ကိုတွယ်ငြိနေပြီ။ သူ လက်တစ်ဖက်ကို နံရံမှာထောက်ထား ပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်က ပုံကျလုနီး ဂျင်းဘောင်းဘီကို ထိန်းကိုင်ပေးထားတဲ့ဟန်က မြင်ရသူက ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာတွေး ကြည့်ကြပါဗျ။
တစ်ယောက်ယောက်က ဘာလုပ်နေတာလဲမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင် ဥက္ကာက ပြန်ဖြေလိမ့်မယ် ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေ အောင် နေပေးနေတာလို့။ သူ အမှန်တကယ်စမ်းသပ်နေခဲ့ခြင်းထင်ရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်ဆန္ဒတွေ ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင် မထိန်းနိုင်ဆို တာမျိုးကိုလေ။ အ၀တ်မဲ့လုနီးပါး ဥက္ကာရဲ့ ကိုယ်လုံးကို မျက်လုံးတွေကျွတ်တော့မတတ်ကြည့်မိနေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက အဖြေ ပေးစရာမလိုပါဘူးလေ။
God, ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဘာများ ဖြစ်သွားပြီလဲ? ဥက္ကာရဲ့ ရှေ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ ခုံးထနေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲဟာ အ၀တ်မဲ့လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံက အမွှေးနုတွေကြားမှာ နည်းနည်းမြင်နေရသလားပဲ။ အရာရာအားလုံးဟာ ခြားနားခဲ့ရင်၊ သူသာပြဿနာရှာတတ်သူ မဟတ်ုခဲ့ရင် ကျွန်တော် သူ့ရဲ့အရေပြားအနှံ့ကို လျှာဖျားလေးနှင့်လျက်၊ ပြီးတော့ လျင်လျင်မြန်မြန်ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ဥက္ကာရဲ့ tattoo ပေါ် ရောက်ရှိကာ လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေပြောင်သလင်းခါကာ နဂိုအသားအရေပေါ်တဲ့အထိ လျာနှင့် သန့်ရှင်းပေးမိမှာပါ။ သူ့ရဲ့ တင်ပါးဆုံကို ကိုင်ပြီးအားပြုထားတာဆိုတော့ ငွားငွားစွင့်စွင့် အသားဆိုင်ဟာ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ အားရပါးရ ဖြစ်မှာပဲ။
ဂျင်းဘောင်းဘီက သူ့ခါးမှာဝတ်ထားတယ်ဆိုရုံ တည်းတည်းလေးချိတ်နေခြင်းကြောင့် သူသာအောက်ကိုနည်းနည်းပိုလျောချလိုက်ရင် ဥက္ကာရဲ့ ငပဲကိုသတိထားကြည့်မိရမှာ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲကို ကိုင်ထားနေပြီ၊ နုနုညံ့ညံ့လေးအထက်အောက် ပွတ်သပ်နေပြီ၊ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ ဆာလောင်မှုတွေ မွတ်သိပ်စွာမပေါ်ခင်ငပဲက ကျွန်တော့်လက်ထဲရှင်သန်ထကြွလာပြီတဲ့။ လက်ဝါးနှင့် အပြည့်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ငပဲကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လှုပ်ရှားပေးနေတာ အားရစဖွယ်တုတ်ပြီးထွားလာတာ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သွားရည် တွေပြည့်နှက်ရပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူ့ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုဖွဖွငုံစုပ်၊ အပေါက်လေးကိုလျှာနှင့်ကလိ၊ ထွားလာတဲ့ ငပဲတစ်ခုလုံး အနှံ့လက်နှင့်ပွတ်သပ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ပိုပိုပြီး ဆာလောင်လာသလို ငပဲကိုအားရပါးရပိုမိုစုပ်မျိုမယ်၊ လတ်ဆတ်ပြီး အနံ့မရှိ တဲ့အသားချောင်းခပ်မာမာကိုလေ။
ဥက္ကာမျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ရတာ ကျော်ကျော့်ကို ဒီအခန်းထဲကထွက်သွားစေချင်တဲ့ပုံပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ သူ့စိတ်တွေ အပြင် သူ့ငပဲကနည်းနည်းမာလာတာကြောင့်ဖြစ်မှာ။ ကျော်ကျော်သာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို အခုပဲလက်နဲ့ထိုးဆွတော့မယ့်အတိုင်း။ ပြီးတော့ ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်ကာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီဦးတည်စေချင်မှာပဲလေ။ ညှို့မျက်ဝန်း အရောင်တောက်တောက်တွေက သူ့တင်ပါးဆုံကို ကိုင်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ ရှေ့ခွဆုံကိုပိုမိုကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်စေချင်တာ။ ပြီးတော့ သူ့ ဗိုက်သားတွေကိုအနမ်းပေး၊ သူ့ abs တွေကိုလျှာနှင့်ပွတ်သပ်စေချင်တာ။ ပြီးတော့ သူ့ဗိုက်သားတွေကိုအနမ်းပေး၊ သူ့တွေကိုလျှာနှင့် လျက် ချက်ကလေးကိုလျှာနှင့်ကလိပေးမည့် ကျွန်တော့်ကို အသေဆာလောင်ဟန်ပေါက်နေတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ကျွန်တော့်လက် အစုံနှင့် ဂရုတစိုက်ဖြည်းဖြည်းဆွဲချ၊ မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို နုညံ့တဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ညှပ်ယူပွတ်သပ်မယ်။ ကောင်း ကောင်းလေးနှင့် ဖြည်းဖြည်းစပြီး စုပ်မျို၊ ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးတွေ ကျစ်ကျစ်သွားတာကို လက်နှင့်ကိုင်ပြီး ခံစားကြည့်ရင် သူကလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှင့်ထိန်းကိုင်ပြီး မွတ်သိပ်ပြင်းပျစွာ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖြတ်သန်းကာ အာခံတွင်းထဲ ထိဖိဖိသွင်းမယ် မဟုတ်လား။
စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ဥက္ကာရဲ့ ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့ ငပဲကပြည့်နေပြီ။ ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကို ဖြတ်သန်းပြီး လည်မျိုထဲ လျောကနဲလျောကနဲ ၀င်ဝင်သွားတာ။ ဥက္ကာရဲ့ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမို သောင်းကျန်းအောင်ပြုလုပ်နေသလိုပဲ။ ဥက္ကာရဲ့ ငပဲဟာ မာတောင့်သထက်မာလာတာ ကျောက်သားအတိုင်းဗျ။ ခဏလေးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ အာခံတွင်းထဲဖြည်းဖြည်းလေးအထုတ်အသွင်းလုပ်နေပြီးနောက် သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်မေးစိကိုဆွဲကိုင်ပြီး သူ့မျက်နှာကိုမော့်ကြည့်စေပါတယ်။ အရည်လဲ့နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေရဲ့ မွတ်သိပ်မှုဟာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ ရေဓာတ်ကို လိုအပ် လာစေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်ခြေဖ၀ါးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်အားပြုရပ်လိုက်တော့ ဥက္ကာက အခန်းနံရံနှင့် ကျွန်တော့်ကျောပြင်ဖိကပ်အောင် တွန်းပို့ရင်းအနမ်း တွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းမွှေပါတော့တယ်။ ပြင်းပျပြီး မိန့်မူးဖွယ်အနမ်းတွေပါ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကိုက်စားတော့ မတတ် ပြန်လည်နမ်းစုပ်မိပါရော။ဥက္ကာရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ပါတယ်။ဥက္ကာရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီလည်း သူ့ကိုယ်မှာ မရှိတော့သလို ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အ၀တ်တွေဟာလည်း အဝေးမှာ။ အခုတော့ အ၀တ်မပါခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုအရေပြားခြင်းထိ ကပ်နေပါပြီ။ နှစ်ယောက်သားရဲ့တပ်မက်မှုတွေဟာ မီးထတောက်တော့မတတ်ဖြစ်နေကြတာများ အပြင်က ရာသီဥတုအေးတာကို ဂရု မပြုမိအောင်ပါပဲလေ။
ကျွန်တော် ဥက္ကာရဲ့ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပွတ်သပ်နေမိခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်သားအမြှောင်းတွေ၊ အရိုးဆက်တွေ၊ ပိုးသားလို နုညံ့တဲ့ သူ့အရေပြားတွေကောပေါ့။ မျဉ်းကွေးတစ်ကြောင်းလိုဝေ့၀ိုက်နေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့ တင်သားဆိုင်တွေဟာလည်းပဲ ကျွန်တော့်လက်အစုံထဲမှာ ကောင်းကောင်းရောက်နေတာပါ။ ကျွန်တော်သူ့ဆံနွယ်တွေကို ပွတ်သပ်မိချိန်မှာတော့ ဥက္ကာရဲ့နှုတ်ခမ်းဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှခွာကွာ နည်းနည်းညည်းညူပါရဲ့။ သူ့လက်တစ်ဖက် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံ၊ ရွှေဥတွေအပြင် တင်ပါးအကွဲကြားက ခရေ၀ထဲ သူ့လက်ညှိုးလေးတွေ နှင့် နှိုက်သေးတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကား နှုတ်ဖျားကညည်းညူရင်း သူလုပ်နေတာကို ငြင်းဆန်ခြင်းမပြု လက်ခံမိပါ တယ်။
ဥက္ကာရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မှေးမှိတ်နေပြီ။ သူ ဘာဖီလင်တွေယူနေပြီလဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နံရံအားမျက်နှာမူ သူ့ရှိရာ ဘက်ကို ကျောပြုရင်း ရပ်ပေးထားတော့ ငွါးငွါးစွင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို လက်တွေနှင့်ပွတ်သပ်နေပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်တင်သား ဆိုင်တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် ဖျစ်ညှစ်ရင်း ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို သူအနမ်းပေးတယ်ဗျ။ ခပ်တိုးတိုးနှုတ်ဖျားက ပြောမယ်ထင်ရဲ့ 'ငါ မင်းကိုသောက်ရမ်းချချင်နေပြီ' လို့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှပြောနိုင်မယ်မထင် တုန်ရီနေတဲ့ ညည်းညူသံတွေနှင့် ငံ့လင့်နေမိမှာ။
သောက်ရမ်းမာနေတဲ့ သူ့ဒစ်ကို ကျွန်တော် လက်ခံဖို့အသင့်သိပ်မဖြစ်သေးခင်မှာပဲ အမြန်ဖိပြီးသွင်းတယ်။ သူ့ငပဲရဲ့မာကျော်မှုက ကျွန်တော့်စိတ်ကိုအလိုက်သင့်အလျားသင့် စိတ်ကြွစေပါရဲ့။ တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့ ငပဲကြောင့် ခံစားချက်က ပိုမိုထိမိလာပါတယ်။ သူ့ ရဲမာန်ဖီသံတွေ ထွက်လာသလို သူ့သွားတွေက ကျွန်တော့်ပခုံးကိုခဲတော့တာလေ....အာ...အ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မိန့်မူးသံရော သူ့ အသံကြောင့်ရော နှစ်ဦးသားရဲ့စိတ်ဆန္ဒကို ပိုပိုဆာလောင်မွတ်သိပ်စေပါရဲ့။ အထုတ်အသွင်း စည်းချက်မှန်မှန်၊ တင်ပါးနှင့် သူ့ဆီးစပ် တဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်သံ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိုချင်မှု၊ သူ့ရဲ့မာန်ပါပါ ဆောင့်သွင်းမှုတွေက ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူ့လက်အစုံနှင့် မလုံလောက်နေသလိုပါ။
ကျွန်တော် ညည်းညူအော်ဟစ်မိတယ်၊ သူ့အမည်ကိုတပြီး ဒီထက်ခပ်မြန်မြန် လှုပ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုမိပါရဲ့နော်။ ဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုတွေသွက်လာချိန်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ့်ဖာသာဆုပ်ကိုင်ကာ ကစားမိပါပြီ။ ခပ်ကျစ်ကျစ်ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဥက္ကာရဲ့ ဆောင့်သွင်းချက်နှင့်အပြိုင်ကစားတာပါ။ ဥက္ကာတစ်ယောက် သူ့ငပဲကို ခပ်ပြင်းပြင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာများ အခုပဲ အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပန်းတိုင်ကို ၀င်ရောက်တော့မယ့်အတိုင်း။
ကျွန်တော်....ကျွန်တော် အရင်ဆုံးပြိုင်ပွဲကို ပန်းဝင်တယ် နံရံတွေကို စိုရွှဲသွားတဲ့အထိ သုတ်ရည်တွေကိုလေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တုန်ခါနေဆဲ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစ်ချက်တစ်ချက် တိုးဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ညည်းညူသံနှင့်အတူ ဥက္ကာရင်ခွင်ထဲ နောက်ပြန်မှီတွယ်မိပါရဲ့။
ဥက္ကာကတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အဆုံးစွန်ထိ တစ်ချက်...အဆုံးစွန်ထိ နောက်တစ်ချက်....အာ...အ။
ဥက္ကာသည်လည်း သူ့ရွှေဥထဲက သုတ်ရည်တွေကုန်သွားမလားဆိုတဲ့အထိ ပစ်သွင်းပါတယ်။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်လည်တိုင်မှာ ပွတ် သပ်နမ်းရှိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းထားတာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပိုမိုဆုပ်ကိုင်ထွေးဖက်မိမှန်းမသိကြ။
နှစ်ဦးသား ကိစ္စပြီးသွားပေမဲ့ ကျွန်တော် ဥက္ကာရဲ့ လက်မောင်းတွေထဲကမထွက်သေးဘဲ ဥက္ကာရဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ မျက်နှာကိုငေးစိုက်ကြည့်မိ နေပါတယ်။ ဥက္ကာက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံ့ပြီးနမ်းရင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်တော့ သူ့ဆံနွယ်တွေကို လက်ချောင်းတွေနှင့် ထိုးဖွမိပြီပေါ့။ ဥက္ကာက ကျွန်တော့်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်အသာလှဲပေးတာကို ခွင့်ပြုမိ.....
'ညီဇော်' စူးစူးရှရှ ကျော်ကျော်ရဲ့ ခေါ်သံကိုကြားရမှ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကလွန်မြောက်ပါတယ်။ အလန့်တကြား အစစ် အမှန်ဘ၀ကို သတိပြန်လည်တယ်ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော် မျက်တောင်တွေကို တဖျတ်ဖျတ်ခတ် ဘာတွေအမှားလုပ်မိခဲ့သေးလဲ အ၀တ် မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်နေလား လေ့လာကြည့်မိပါရဲ့။ Jesus, ၀ိုး...ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဥက္ကာက အသာကိုင်ရင်း ဖျစ်ညှစ်တယ်။ ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်ကာ ကျွန်တော်လိမ်းလို့ပြီးပြီနော် လို့ပြောလိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့်အသံက နည်း နည်းတိုးညှင်းပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ တုန်ခါမနေပါဘူးလေ။
ဥက္ကာ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ စိုက်ကြည့်မှု ခံစားချက်ကို ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြည်းညှင်းစွာ လက်တစ်ဖက်ကို ဥက္ကာဆန့်ထုတ်ပေး တယ်။ ကျွန်တော်လည်း လက်ကမ်းလိုက်ပြီး ဥက္ကာလက်ကိုလှုပ်ရမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာကကျွန်တော့်လက်ကို မလွှတ် ဘဲ မသိမသာကိုင်ထားတာကြောင့် ကျွန်တော်ကသာပြန်ဆွဲလိုက်ရင်း ခြေထောက်တွေကိုတစ်ဖက်သို့လှမ်းဟန်ပြုလိုက်တယ် ကျွန်တော့် ငပဲမာနေတာကို တစ်ယောက်မှမမြင်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရင်းပေါ့။ ကျွန်တော့်အရပ်က ဥက္ကာလောက်မမြင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးကပ်နေတာကြောင့် နည်းနည်းမူးဝေသလို ခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ ဥက္ကာက ကျွန်တော် လက် ဆွဲနှုတ်ခြင်းကို ခွင့်မပြု သေးဘူးလေ။ ကျွန်တော် ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို လှန်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခံစားနေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တူနေရတာပါလိမ့်။ 'ကျေးဇူးပဲဗျ' ဥက္ကာကပြောပါတယ်။ သူ့အသံက နုညံ့ချိုမြိန်ပေစွ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲကြားရလောက်အောင် တိုးညှင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲကို ဟို....ဟို...စိုက်ကြည့်တာ...
God, ကျွန်တော် သူ့ကိုလိုချင်ပိုင်ဆိုင်ချင်လိုက်တာ။ 'ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော်လည်း ဥက္ကာအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်' ကျွန်တော် လည်း တုန်ရင်နေတဲ့ အသက်ရှူသံထက်ပိုကျယ်အောင်ကြိုးစားရင်း တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဥက္ကာက ကျွန်တော့်လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ခဏ ကျွန်တော်သိနေမိတာက ဥက္ကာ..သူ ထွက်ခွာတော့မယ် ပြီးတော့ ဒီလို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့ချင်မှတွေ့ရတော့မှာ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဥက္ကာရဲ့ ပန်းသွေးရောင်လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့်မေးစေ့ကိုစူးစမ်းသလို လှမ်းကိုင်လိုက် တော့ ကျွန်တော့်မှာ နေရာမှာတင်အေးခဲသွားသလို ငြိမ်သက်ပေးမိပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသေချာသလို ရပ်တန့်ဖို့လည်း မ တောင်းပန်မိ။
'မိတ်ကပ်တွေ မညီတော့ရင် ခင်ဗျားပြန်လာပြီး ပြန်လိမ်းပေးနိုင်မလား' ဥက္ကာ က အသံတိုးတိုးနဲ့ပြောတာ။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွေးထွေးမှုကို ခံစားရမိနေတဲ့အထိ နီးကပ်နေပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့လေ။
ကျွန်တော့် အဆုတ်တွေထဲ လေမရှိတော့သလိုပါ။ ကမန်းကတန်းလေကို ၀၀ရှူသွင်းရင်း 'အိုကေ...အိုကေ ရတာပေါ့' လို့ပြောရတယ်။ 'ကောင်းတာပေါ့' တဲ့ သူက ခပ်တိုးတိုးဆိုရဲ့။ ပြီးတော့ နွေးထွေးပြီး သီးသန့်ဆန်တဲ့အပြုံးကို ကျွန်တော့်ကိုပေးတယ်။ လက်အစုံကို အသာချ ကျွန်တော့်ကိုကျောပေးပြီး အလုပ်ခွင်ရှိရာကို ထွက်သွားရဲ့...တည်ငြိမ်၊ ကျပြီး ယုံကြည်ချက်အပြည့်ပါသော ခြေလှမ်းများဖြင့် ပေါ့နော်..။
ကျွန်တော်ကလည်း ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုသိမ်းဆည်းရင်း ကျော်ကျော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုမိ အခန်းပြတင်း ကနေ ကမ်းခြေကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်မိပါတယ်....ရာသီဥတုက သာယာလှပေစွ။ ။
Alex Aung (15 Dec 2011)
Posted by Min Lay at 7:46 AM